ZPLAY သည် MPT သုံးစွဲသူများအတွက်အထူးအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ANDROID Game များကို မိမိတို့ ANDROID ဖုန်းများဖြင့် Download ဆွဲနိုင်သည်။ ၀န်ဆောင်မှုယူထားသည့်တိုင် MPT မှကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။လက်ကျန်ငွေမလုံလောက်ပါက အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပဲ ငွေထပ်မံဖြည့်သည့်အခါပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။ Portal အားမမှန်ကန်သုံးပါက Service Provider များဖြစ်သော MPT, ZED နှင့် CNT တို့မှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
Zplay သည် အပတ်စဉ်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုရယူသည့်နေ့မှစပြီး တစ်ပတ်လျှင် 315KSကောက်ခံပါမည်။ (၀န်ဆောင်ခတွင်အခွန်ပါဝင်သည်)။ MPT သုံးစွဲသူများအတွက် ၀န်ဆောင်မှုစယူသူများအတွက် ခုနှစ်ရက်အခမဲ့။
၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ငွေပေးချေမှုအတွက်ကြိုတင်ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။ပျက်ကွက်ပါက ၀န်ဆောင်မှုရပ်တန့်ပါလိမ့်မည်။
ZPLAY သည် Andriod ဖုန်းသုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။အကယ်၍ updated version မဖြစ်ပါက (သို့) မိမိဖုန်းနှင့်ဆက်စပ်သော RAM,Memory ပြသနာများဖြစ်ပါက ဂိမ်းကစားနိုင်ခြင်းရပ်တန့်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ယခုဝန်ဆောင်မှုသည် Mobile Application သတ်သတ်မဟုတ်ပါကြောင်းသိထားရပေမည်။ ထို့ကြောင့် MPT, ZED နှင့် CNT တို့သည်ဖုန်းနှင့်ပတ်သတ်သောဝန်ဆောင်မှုမဟုတ်ပါကြောင်းသိထားရပေမည်။
MPT Android အသုံးပြုသူများအတွက် အထူးအခွင့်အရေးအနေဖြင့် အကောင်းဆုံးသောဂိမ်းများကို Download ရယူကစားနိုင်မည့် Android Games ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
2.မည်သို့ ZPLAY Wap Portal ကိုရယူနိုင်မည်နည်း?
Android ဖုန်းများအတွက် မိမိတို့ Mobile Browser မှတစ်ဆင့် zpaly.com.mm ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
3.ZPLAY အတွက်ဘယ်လောက်ပေးရပြီး ဘယ်လောက်များများဂိမ်းများကို Download ရနိုင်မည်နည်း။
၀န်ဆောင်ခု တစ်ပတ် 315Ks ဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်အတွင်း ဂိမ်းများအားလုံးကို Download ရယူနိုင်သည်။
4.မည်သူများက ZPLAY ကိုရယူနိုင်မည်နည်း။
မရပါ။ Android သုံးစွဲသူများသာရသည်။
6.Iphone တွင် သုံးစွဲနိုင်ပါသလား?
7.ZPLAY ကိုရယူပြီးပါက ဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးနိုင်မည်နည်း။
၀န်ဆောင်မှုရယူပြီးပါက ရယူသည့်အချိန်မှစပြီး ဂိမ်းများကို Download ဆွဲကစားနိုင်ပါသည်။
8.Wap Link ကိုစသုံးသည့်အချိန်မှစပြီး ပိုက်ဆံကောက်ခံပါသလား?